A na-enye gị mmata, Authority na-ewere ikike | | Martech Zone
Izu a, enwere m mkparịta ụka dị ịtụnanya na otu onye ọrụ ibe m na-eto eto na ụlọ ọrụ ahịa. Obi gbawara onye ahụ. Ha bụ ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ na ọtụtụ afọ nke ịrịba pụta. Agbanyeghị, a na-elegharakarị ha anya ma ọ bụrụ ohere ikwu okwu, ndụmọdụ, ma ọ bụ nlebara anya sitere n'aka ndị ndu.
Na 40 afọ, my ikike bịara n'oge na-adịghị anya karịa ọtụtụ ndị isi a ma ama n'ime ahịa ahịa. Ihe kpatara ya dịtụ mfe - abụ m onye na-arụsi ọrụ ike, na-arụ ọrụ na-arụpụta nke mere ka ndị isi azụmaahịa m nyere aka nweta ikike. Enwetara m akụkọ banyere ụlọ ọrụ mere ka ọ bụrụ akwụkwọ na isi okwu ndị nwere aha ha na ya. Amalitere m azụmaahịa na akpọghị m onye guzobere ya. Anọ m na-ele ka ndị m kọọrọ ha na-akwalite ma na-akwụ ụgwọ nke ọma, ebe m na-arụrụ ha ọrụ. Ọtụtụ n’ime ha bara ezigbo ọgaranya.
Anaghị m ata ha ụta. Enwere m ekele maka ihe m mụtara na-ele ha. N'ezie, abụ m ezigbo ndị enyi ọtụtụ n'ime ha taa. Ma n'oge m na-arụ ọrụ m, echere m ghọtara dị ka ikike. Ihe m mụtara mgbe m lechara ha bụ na ha ghọrọ ndị ọchịchị n’ihi na ọ dịghị mgbe ha chere ka a mata ha. Ha nara ikike ha.
Emehiela ụzọ kọwaa nke ahụ ka ha were ya n'aka m. Mba, ha nara ya ụlọ ọrụ. Ghọta abịaghị mbụ, ọ bịara mgbe ọ gasịrị. Enweghi ike igbochi ha inweta ihe ngosi. Mgbe e nwere ihe omume ikwu okwu na, ha na-egwuri egwu ike iji nweta ohere kacha mma, ha gbalịrị ịkwalite… ọbụlagodi ịkwalite ntinye aka ha. Mgbe enwere mkparịta ụka, ha na-achịkwa ya. Mgbe ha hụrụ ohere inye onyinye, ha nyefere ya. Mgbe ha chọrọ ịgba akaebe, ha na-arịọ maka ya.
Ewere ikike, enyeghị ya. Naanị nkwenye ka enyere. Ọ bụrụ na enwere otu ihe ị ga-amụta site na mkpọsa Trump na Sanders, ọ bụ nke a. Onweghi onye na ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke ọma ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị chọrọ ka ndị a abụọ a na-agba ọsọ. Ndị oghere mmeri ahụ achọghị ịma - ha were ikike. N'aka nke ya, ọha mara ha maka ya.
Otu onye ọrụ ibe m katọrọ n'ihu ọha na nso nso a Gary Vaynerchuk n'ihu ọha. Ọ na-ewuli elu, ọ na-enweghị mmasị na ụdị ya na ozi Gary. Kemgbe ọ gbadara post ahụ, mana m tinyere otu okwu: Gary Vaynerchuk achọghị ịma ihe ị chere. Gary echeghị ka onye isi ụlọ ọrụ a mata ya, Gary weere ya. Mmụba nke ikike ya na nkwụsi ike ya bụ ihe àmà na-egosi na ikike ahụ kwesịrị ya.
Ya mere, lee ndụmọdụ ụfọdụ m ga - achọ inye ndị nwere ikike na nkụda mmụọ:
Na-achọ naanị ọdịmma onwe gị - Agaghị m anapụ ndị ọzọ ma ọ bụ na m na-ekwu ịkwụsị inyere ndị ọzọ aka. Have ga-enwerịrị ihe ndekọ egwu dị egwu iji wulite ikike gị. Mana ị ghaghị iwepụta oge n'ọrụ gị, ma kpebisie ike ịrụ ọrụ maka onwe gị. Chee maka ikike gị n'ọdịnihu dịka akaụntụ ezumike nka. Nweghị ike ịla ezumike nká ma ọ bụrụ na ịchụọ taa. Otu ihe ahụ maka ikike gị. Notgaghị ewulite ikike belụsọ ma itinye oge na mbọ taa. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ 100% nke oge na onye were gị n'ọrụ ma ọ bụ ndị ahịa, ị naghị etinye ihe ọ bụla na onwe gị. Atụla anya inweta mmata. Gaa na okwu okwu gị ọzọ… ọbụlagodi na ịnweghị ndị na-ege ntị ma. Gaa dee akwụkwọ. Gaa bido pọdkastị. Gaa wepụta onwe gị ịnọ na otu panel. Gaa ike agha ihe omume ka ị kwuo. Ugbu a.
Nwee obi ike - Nkwukọrịta okwu siri ike, ịmụta ya dị oke mkpa. Eji m nkwupụta nkwupụta nke ahụmịhe m kwadoro. Ama m ihe m na-eme, m na-ekwu ya. Ana m enye iwu nzukọ (ọ bụghị naanị n'ihi na m kpọrọ ha asị) n'ihi na anaghị m eji okwu dịka enwere ike, Echere m, anyị nwere ike, wdg Adịghị m ekwu okwu n'ọnụ, anaghị m arịọ mgbaghara, anaghịkwa m ala azụ mgbe a mara m aka. Ọ bụrụ na mmadụ maa m aka, azịza m na-adị mfe. Ka anyi nwalee ya. Nke ahụ abụghị n'ihi na echere m na m maara ihe niile, ọ bụ n'ihi na enwere m obi ike na ahụmịhe m.
Na-eme ihe n'eziokwu - Amaghị m ihe m na-amaghị. Ọ bụrụ na a maa m aka ma ọ bụ jụọ echiche m banyere ihe m na-ejighị n'aka, ana m edo mkparịta ụka ahụ ruo mgbe m mere nyocha. Na-ada ụda okwu siri ike karịa, "Ka m mee nyocha na nke ahụ, amaghị m." ma ọ bụ “Enwere m otu onye ọrụ ibe m ọkachamara na nke ahụ, ka m jụọ ya.” karịa ịnwa ịmebi ụzọ gị site na nzaghachi ebe ị na-anwa ịba ụda. Naghị eme onye ọ bụla ihe ọchị mgbe ị na-eme ya. Ọ bụrụ na i zighi ezi, otu ahụ ga-aga… kweta ya ma gawa n'ihu.
Dị iche - Onye obula is iche iche. Gbalị itinye ọnụ ga-eme ka ị dabara adaba. A ga-ezobe gị n'etiti onye ọ bụla ọzọ na-enweghị ikike na mmata n'akụkụ gị. Kedu ihe dị iche na gị? O bu odidi gi? Ihe ọchị gị? Ahụmahụ gị? Ihe obula obu, were ya dika ichere onwe gi nye ndi ozo. Adịghị m ogologo, abụba m, agba isi awọ… mana ndị mmadụ na-ege m ntị.
Dị njikere - Ohere di gi gburugburu. Ga na-amụrụ anya mgbe niile maka ha. Ana m aza ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ arịrịọ ọ bụla a gwara m ka m nọrọ na pọdkastị ma ọ bụ nye nkwuputa maka edemede ụlọ ọrụ. Achọrọ m ohere oru ndi oru nta akuko. Ana m edozi okwu ndị na-ama aka ekwetaghị m ma ọ bụ nye agba ọzọ mgbe isiokwu ezughi oke.
Atụla egwu - Beingbụ onye isi apụtaghị na mmadụ niile masịrị gị. N’ezie, n’itinye onwe gị n’ihu ndị ọzọ, ndị ahụ na-ekwetaghị na ha ga-abụ ndị lekwasịrị anya. Ọ bụrụ na m na-ege onye ọ bụla na-ekwenyeghị m na ndụ m niile, agaraghị m enweta ebe ọ bụla. Ọ bụrụ na m gbalịrị ka onye ọ bụla hụ m n'anya, a ga-anabata m n'ime ụlọ ọgwụ. M na-akọkarị akụkọ banyere mama m. Mgbe m bidoro azụmahịa m, ihe mbụ o kwuru bụ, “Oh Doug, kedu ka ị ga-esi nweta mkpuchi ahụike?” Mgbe ụfọdụ ọbụna ị ga-egosipụta ndị ị hụrụ n'anya ezighi ezi.
Mee elu mee ala, isi ihe na-achịkwa ikike bụ na ị na-eche ọdịnihu gị ihu, ọ bụghị onye ọ bụla ọzọ. Ikwesiri ikike ị kwenyere na ị nwere… mana ịnweghị ike ịnọdụ ala ma chere ka ndị ọzọ mata gị ruo mgbe ị were ya. Ozugbo ị tinyere ego ahụ, a ga-amata gị. Ma ọ bụrụ na ndị ọzọ amata gị - ọbụlagodi na nkatọ - ị na-aga.
M gara ngosi site ịtụnanya Ellen Dunnigan (ya ike, Ntukwu na Business, dekọrọ vidiyo na post a) o nyekwara usoro ndụmọdụ maka ikike ụlọ. Ọ chọrọ ka ị ma ụma ma kpachara anya na ịbịaru nso ọ bụla Ohere inye ikike. Aga m akwado gị ịgbaso ụlọ ọrụ Ellen na mgbasa ozi mmekọrịta na Youtube, ị ga-amụta ụda! Iku ya ike na ị ga-agbanwe.
Tags: mụrụ anyaikikeobi ikeikike ụlọicheDonald opigary vaynerchukgary veen'eziokwuokwu ihu ọhaNa-ekwuopi